လွှတ်ပေးရန် 1983 ဟောင်ကောင်
Bonistichesky catalog | တိုင်းဒေသကြီး - အာရှ နိုင်ငံ - ဟောင်ကောင် အပိုင်းအရေအတွက် * P-187d ဂုဏ်သိက္ခာ $ 100 ကို အင်္ဂလိပ် - // - 100 ကိုဒေါ်လာ နှစ် 1983 မှတ်စုများ မှတ်စု / ခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်ရရှိနိုင် Image ကို
Silver, အကြွေစေ့သမ္မတကတော် Lavibond
အကြွေစေ့စီးရီး: သမ္မတကတော် Lavibond: တစ်အသစ်အဆန်းနှင့်အတူကြွယ်ဝပြည့်စုံသောဝိညာဉ်တော်သင်္ဘော, ။ ဒဏ္ဍာရီမိန်းကလေး, မှူးနှင့်သူ့လက်ထောက်ကိုခစျြသူ့ကိုယ်သူသင်္ဘောကြီးပေါ်ကိုတက်ခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်းပြောပါတယ်။ ရလဒ်: သူမ၏၏မင်္ဂလာဆောင်မှူးနှင့်အတူရှိစဉ်အခါ, လက်ထောက်သင်္ဘောသင်္ဘောကိုစေလွှတ်အပေါင်းတို့နှင့်သေဆုံးခဲ့သည်။ ထိုသူတို့သညျပွောဆို: တိုင်းအနှစ် 50, ဤအရပ်တို့ကို ထဲမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်။ obverse ဒါဟာ (နမူနာ - 925-ငါ) တစ်ဦး, ငွေဖြစ်ပါတယ်အပေါင်းတို့နှင့်တထောမိတ္တူ၏ပမာဏကိုအတွက်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ အမည်ခံတန်ဖိုးကို: ငါးဒေါ်လာ (Tokelau) ။ အရောင်ဟောင်းနွမ်း, လူသိကုမ္ပဏီ Numiscollect ထဲမှာ Rapped ။ 38,61 မီလီမီတာ - ကျွန်တော်တို့က၎င်း၏အလေးချိန်အကြောင်းပြောဆိုလျှင်, နှစ်ဆယ်ငါးဂရမ်နှင့်တစ်ဦးချင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကို Reverse ကောင်းတဲ့မြို့ပတ်ရထားပုံစံသူမ၏၏ obverse ဆငျ, အောက်ခြေမှ - လက်နက်စက်များ၏အင်္ကျီကိုကအထက်တန်နှင့်middleဗဟိုတွင်ပိုမိုတိကျစွာပင်မြင့်မား - ဘုရင်မကြီးရဲ့ပုံတူ။ အလွန်ကိုအသုံးပြုပြီး, ငွေဒင်္ဂါး "သမ္မတကတော် Lavibond" ၏ပြောင်းပြန်လိုက်ဖမ်းပြုမိ: ဤင့်သင်္ဘောအမည်တူ၏တစ်ဦးလက်-ကျမ်းစာ၌ရေးထားရုပ်ပုံနှင့်သင်္ဘော၏နာမတော်နှင့်အတူကမ္ပည်းစာ၏အောက်ခြေနှင့်စီးရီးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
စပိန်၏ 10 ယူရို "400 အနှစ် - ဂျပန်ချစ်ကြည်ရေး »
"စပိန်၏ 400 နှစ်တာ - ဂျပန်ချစ်ကြည်ရေး" - ကအမည်ရှိနှင့်ဤရက်စွဲကိုမှဆက်ကပ်အပ်နှံဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်။ အဆိုပါအကြွေစေ့စပိန်အတွက်ဒဏ်ခတ်နှင့်ပြိုင်ပွဲအတွက်ပါဝင်သူဖြစ်ပါတယ်ခဲ့သည်: Coin နက္ခတ် - 2014 မစ်ရှင်သို့မဟုတ်ပထမဦးဆုံးသံတမန်လေးလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းရာအရပျလုယူသောစပိန်, ဂျပန်သွားရောက်၎င်း၏လွှတ်ပေးရန် ၏အခါသမယခဲ့သည်။ အင်္ဂါရပ်များ: တန်းတူ 10 ယူရိုတန်ဖိုး, 925, ငွေ, အလေးချိန် 27 ဂရမ်, အချင်း 40 မီလီမီတာ, 30000 အုပ်ရေတစ်စောင်ရေနှင့်အတူအရည်အသွေးသက်သေပြချက် coinage, နဲ့ နှစ်ဦးကြိမ်ငုပ်လျှိုးနေ image ကိုလျှောက်ထား ထိုသို့နိုင်ရန်အတွက်ဒင်္ဂါးပြား၏ထုတ်လုပ်မှုအမိန့်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းသတိပြုပါ။ ကြောင့်ဒီကပစ္စည်းဟာအလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်စုဆောင်းမှုအတွက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ obverse: ငါတို့သည်၎င်း၏အမည်, အဘယျအနှစျတှငျကသည့်ဒင်္ရာ, ပြောပြကြောင်းအရိပ်လက္ခဏာကိုတွေ့မြင်နှင့်ပုတီးအနေဖြင့်ကမ္ဗည်းစာနှင့်အဆင်တန်ဆာmiddle၌, ပုံတူ Juan Carlos ငါ ။ ပြောင်းပြန်: ခရီးစဉ် (မစ်ရှင်) သံအမတ်ကြီး (ဆာမူရိုင်း HasekuraTsunenaga) ၏အောင်မြင်မှုဆုတောငျးလလက်ဝါးကပ်တိုင်ရန်။ ဂျပန်မြို့ Sedai ၏ပြတိုက်ကဒီဇာတ်လမ်းကိုများအတွက်အခြေခံအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်သောပန်းချီ, ထားရှိမည်။ (ကက hidden ရုပ်ပုံအဖြစ် - ရုပ်ပုံ) ကငုပ်လျှိုးနေ image ကိုလည်းရှိပါသည်: သင်အလံမှာကြည့်ရှုသောအခါ, view ၏ထောင့်ပေါ် မူတည်.
ငွေသားကိုင်တွယ်ခြင်းယူရိုငွေဥရောပသမဂ္ဂ2ယူရို 2012 တွင် 10 နှစ် (ယူရို) - စျေးနှုန်းကိုအကြွေစေ့၏တန်ဖိုး
ဖျေါပွခကျြ အင်တာနက်ပေါ်ရှိစျေးနှုန်းများ ဒင်္ဂါးပြားဖျေါပွခကျြ Krause များအတွက်အခန်း KM#306 coinage အမျိုးအစား အမှတ်ရဖွယ် အကြွေစေ့ Face2ယူရို ကတ်တလောက်စျေးနှုန်းများ ကာယ Properties ကို Mint,: ပြည်နယ် Mint, ဘာလင် မိတ္တူ 30.
Nair က 50 သတင်းထုတ်ပြန်ချက် 1991 နိုင်ဂျီးရီးယား
Bonistichesky catalog | တိုင်းဒေသကြီး - အာဖရိက နိုင်ငံ - နိုင်ဂျီးရီးယား အပိုင်းအရေအတွက် * P-27b ဂုဏ်သိက္ခာ 50 ကို naira အင်္ဂလိပ် - // - 50 ကို Naira နှစ် 1991 မှတ်စုများ မှတ်စု / ခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်ရရှိနိုင် Image ကို
10 Kwacha လွှတ်ပေးရန် 1983 မာလာဝီ
Bonistichesky catalog | တိုင်းဒေသကြီး - အာဖရိက နိုင်ငံ - မာလာဝီ အပိုင်းအရေအတွက် * P-16e ဂုဏ်သိက္ခာ 10 kwacha အင်္ဂလိပ် - // - 10 Kwacha နှစ် 1983 မှတ်စုများ မှတ်စု / ခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်ရရှိနိုင် Image ကို
1984 ခုနှစ်တွင် 100000 ပီဆို Bolivianos လွှတ်ပေးရန်, ဘိုလီးဗီးယား
Bonistichesky catalog | တိုင်းဒေသကြီး - တောင်အမေရိက နိုင်ငံ - ဘိုလီးဗီးယား အပိုင်းအရေအတွက် * P-171 ဂုဏ်သိက္ခာ 100,000 ပီဆို bolivianos အင်္ဂလိပ် - // - 100,000 ပီဆို နှစ် 1984 မှတ်စုများ မှတ်စု / ခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်ရရှိနိုင် Image ကို